December 6, 2021 242
दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका दुई जनाको नमुना संकलन गरेर जिन स्विकन्सिङ गर्दा ओमिक्रोन ​भेरियन्टको सङ्क्रमण भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएको खबर रातोपाटीमा छ ।
ओमी`क्रोन भेरियन्ट नियन्त्रण गर्न नेपालमा लगाइएको खो`प कत्तिकाे प्रभावकारी छ ?
कोभिडको जो`खिम रहेको समयमा खो`प लगाउने कार्य पनि अघि बढिरहेको छ । नेपाल लगायत संसारभर खो`प अभियान सुरुवात भएपछि मृ`त्युदरमासमेत कमी आएको छ । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा खोप कार्यक्रमले तीव्रता पाएपछि मृ`त्युदरमा कमी आएको छ । काेभि`डकाे जाे`खिम कम भएसँगै मानिसहरूकाे आवागमन र आर्थिक गति`विधि विस्तार हुन थालेकाे थियाे ।
को`भिडको दोस्रो लहरको सुरुवातीमा दैनिक करिब दुई सय मानिसको मृ त्यु भएको थियो । अहिले भने मृ त्युदरमा कमी आएको छ । अहिले पनि दैनिक तीन सय संक्र`मित थपिने गरेका छन् ।
खो`पकै कारण मानिसको जनजीवन सामान्य गइरहेको समयमा ओमीक्रोनले के र कसो गर्ला भनी सर्व`साधारणमा सन्त्रास फैलाएको छ । अहिले देखिएको ओमी`क्रोनले जनजीवनलाई कतिको प्रभाव पार्छ त ? खो`प लगाएकालाई ओमीक्रोनको कस्तो असर गर्छ ?
अफ्रिका लगायत विभिन्‍न मुलुकमा देखिएको ओमीक्रोनले सबैलाई प्रभावित पार्न सक्‍ने भाइरो`लोजिष्‍ट डा.लुना भट्ट बताउँछिन् । कोभिडको नयाँ परिवर्तित भरियन्टले भाइरसलाई मानिसको जनजीवनलाई अ`सर गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मुख्यगरी जहाँ-जहाँ ओमीक्रोनदेखिएका छन् त्यस्ता मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय मानिसहरूको गति`विधि बढदै गएकाले यसको प्रभाव पर्न सक्ने भट्टले औंल्याइन् ।
विभिन्न मुलुकले भेरियन्ट`को स्वरुप अनुसार खो`पको निर्माण गर्न थालिसकेको भट्टले जानकारी दिइन् । ‘नयाँ भेरि`यन्ट देखा पर्दा र भाइरसको स्वरुप`अनुसार खोप निर्माण नहुँदा खोपले काम नगर्न पनि सक्छ,’ उनले भनिन्,’ नेपालमा लगाइरहेको खो`पले काम पनि नगर्न सक्छ ।’
समयमा सचेत`ता अपनाउन सकिएन भने पुनः संक्रम`ण फैलन सक्ने भट्टले चेतावनी दिइन् । जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । सामाजिक दूरी पालना र मास्कको अनि`वार्य प्रयोग हुनुपर्छ ।
हालसालै संसारभर प्रचलनमा आएका केही खोपहरू पहिले देखिएका भाइरसका लागि निर्माण गरिएको हुनाले ओमिक्रोन`लाई काम गर्न नसक्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. सागरकुमार राज`भण्डारीले बताए ।
‘निश्‍चित सममयमा देखिएका भाइ`रसका लागि खोप निर्माण गरिएकाले थप देखा परेका भाइरसका लागि खोप प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने । अरुबेला पनि यस्तो भाइ`रस देखा पर्ने गरेकाले यसले स्वरुप परिवर्तन गरिरहने उनको भनाइ छ ।
‘विदेशबाट आएका मानिसलाई क्‍वारेन्टीनमा राख्‍नुपर्छ,’ उनी भन्छन,’ ट्रान्जिट मुलुक भएर आउनेलाई अझ बढी निगरानीमा राख्‍नुपर्छ ।’ कोभिडबाट सुरक्षित रहन मुख्य`गरी सामाजिक दूरी कायम गरी खोप लगाउने कार्यलाई तिव्रता दिन उनले आग्रह गरे ।
सरकारसँग सबै नागरिक`लाई उनले बुष्‍टर डोज लगाउन डा. राजभण्डारीले आग्रह गरे । नयाँ भेरियन्टलाई लक्षि`त गरी खो`पलाई तीव्रता दिन उनले सुझाव दिए ।
खो`पविज्ञ डा. जीवनबहादुर शेरचनका अनुसार नयाँ भेरियन्ट आउदा लगाएको खो`पले काम गर्न नसक्छ । भेरियन्ट शरीर`मा समायोजन हुन नसक्दा प्रभाव पार्न नसक्ने हुन्छ । स्वरूप फेरिएर आएका हुनाले पनि यसको प्रभावकारीता नहुन सक्छ ।
अहिले लगाइरहेको खोपले नयाँ भेरियन्ट`लाई काम गर्न सक्नेगरी नबनाएको हुन सक्ने उनले बताए । खो`प लगाएका संक्रमितलाई गम्भीर अवस्थामा पुग्‍न नदिने उनको भनाइ छ ।
अफ्रिका लगायतका मुलुकबाट हुने चार्टर्ड लगायत उडान तथा विभिन्न ट्रान्जिट भएर आउने यात्रुलाई प्रतिबन्ध गर्न शेरचनले सुझाव दिए । केही समयलाई स्थगित गरी विदेशबाट आएका मानिसलाई क्‍वारेन्टीन गर्नुपर्ने उनले अडान राखे ।
यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई मुख्य गरी स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन उनले सुझाव दिए । नेपालमा ओमीक्रोन भाइ`रस फैलिएमा बालबालिका र ज्येष्‍ठ नागरिक प्रभावित हुन सक्ने उनले प्रस्ट पारे । ईकागज बाट
Prevयो भिडियोमा के छ त्यस्तो ? सामाजिक संजालमा बन्यो भाइरल (भिडियो सहित)
Nextडलरको भाउ बढ्यो की घट्यो ? यस्तो छ आजको विनिमय दर